I-Sandpoint Cottage- Ithambile kwaye ibekwe ngokufanelekileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMindy
I-Brand Spankin Entsha!
Ikhitshi eligcweleyo, esonga i-sofa yokulala egcweleyo, Igumbi lokulala: ibhedi enkulu yendlovukazi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo w/ibhafu/ishawari, *i-WIFI egqwesileyo, indawo yomlilo, iTV enkulu yescreen esicaba, iwasha/idryer. Ukuhamba umgama ukuya edolophini * UkuHamba okuLula/Ukukhwela ibhayisekile ukuya kwiMarike yamaFama, ulwandle lwesiXeko, iindawo zokutyela, ukuyokuthenga, nokunye. I-15 min drive ukuya kwi-Schweitzer Mountain Ski Resort, i-5 min ukuya e-Dover ngebhayisikili / i-Trail yokuhamba.
SIYAZITHANDA izilwanyana zasekhaya * Finyelela kwi-Hostess for Pet Policy, umrhumo ongabuyiswayo we-50 yeedola ngokuhlala, ngesilo-qabane ngasinye.
Ikhaya lakho elincinci kude nekhaya!
Idolophu yethu encinci kukuhlala kwakho kude kubuxakeka bobomi :) Yehlisa isantya, phefumla, kwaye uthabathe iintaba ezisingqongileyo, iifama, izilwanyana zasendle, kunye namachibi. Iyunithi ibekwe ngokulula edolophini apho kuqhelekile ukuba undwendwele iDolophu yeMoose!
*Le yunithi inazo izinyuko (enegumbi lokulala elinemibono emithini) okt; akufikeleleki kwisitulo esinamavili.
*Unexhala lokuCoceka?! Asikusoli! SiyiRenti eqinisekisiweyo yokuCoca! Sithatha ucoceko njengento ebalulekileyo kwaye silandela iprothokholi yokucoca ebanzi ehamba ngaphaya kwemigangatho eqhelekileyo.
52" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
Simi kanye kwindlela yebhayisekile-imizuzu emi-5 ukusuka edolophini kunye neMarike yamaFama kunye nebhayisekile emfutshane/uhambo lokuya eCity Beach. Intaba yaseSchweitzer ikhawuleza i-20 min uqhuba intaba.
Silapha ukuba uyasidinga. Kungenjalo siya kukushiya wedwa ukonwabele ukuhlala kwakho!